VIDEO:Ninka loo qabtey dilka Sh. C/qaadir Gacamey & xiligii la qabanayey (DAAWO) – SBC
VIDEO:Ninka loo qabtey dilka Sh. C/qaadir Gacamey & xiligii la qabanayey (DAAWO)
Posted by editor on February 15, 2013 Comments
Baraha Internet-ka ayaa lagu soo bandhigay video muuqaal ahaan aad u liita oo mobile lagu duubay oo muujinaya muuqaalka ninka loo haysto dilkii Sheekhg C/qaadir Nuur Faarax (Gacamey), waxaana ninkan oo ah nin dhalinayaro ah la sheegay in ay qabteen dadka xaafada Masjidka Sheekha lagu diley, iyadoo wiil uu dhaley Sheekha oo ninkaasi eryaday uu suuragaliyey in la qabto ninkan loo haysto in uu dilka geystey.
Muuqaalka Video ah oo mid aad liita waxaa si wanaagsna looga maqalayaa ninka dilka geystey wareysi ay la yeelanayana dad careysan oo ku soo qamaamay, iyadoo wajiga ninkan dhaawacyo ay ka muuqdaan kuwaasi oo ay u geysteen dadkii raacdeysanayey.
Ninkan oo ah nin dhalinaro ah oo da’a ahaan 20 sano jira waxaa video-ga laga maqli karaa halkii uu ka yimid, waalidkiis magacyadooda, magaalada uu ku dhashay, cidii uu la noolaa intii uu joogay magaalada Garoowe, laakiin dadkii careysnaa ee ninkan su’aalaha waydiinayey waxaa ugu badan ee ay waydiinayeen ayaa ahaa cida soo dirtey iyadoo lagu celcelinayey su’aasha aheyd “Yaa ku soo diray”.
Ninkan wuxuu kaloo sheegayaa magaca nin dhakhtar ah, waxaase aad u badan buuqa ka uudaan ninkaasi loo haysto dilka Sheekh C/qaadir Nuur Faarax ILAAH ha u naxariistee.
Waxaa ninkaasi loo gacan galiyey ciidamada amaanka Puntland kuwaasi oo su’aalo waydiin ku haya, iyadoo laamaha amaanka ay xaqiijiyeen inay saxaafada u soo bandhigi doonaan baaritaankaasi wixii ka soo baxa.
Link-ga video hoose riix si aad indhahaaga ugu aragto muuqaalkan.